Home Wararka Kooxda Al-shabaab oo sheegtay in raggii Baardheere lagu toogtay aysan ka tirsaneeyn!!
Kooxda Al-shabaab oo sheegtay in raggii Baardheere lagu toogtay aysan ka tirsaneeyn!!
Al-Shabaab ayaa ka hadlay war kasoo baxay Maamulka Degmadda Baardheere oo ku aadan in saakay ay toogteen Lix ruux ay sheegeen in ay ka tirsanaa Ciidamadda Al-shaabab.
Qoraal kasoo baxay Shabaab oo lagu baahiyay barahooda ayaa lagu sheegay in ragga la dilay ay isugu jireen Ganacsato iyo dad Ahlu diin ah oo maalmihii lasoo dhaafay lagasoo qabtay Xaafadaha Magaaladda Baardheere.
Sidoo kale Shabaab waxa ay sheegeen in ragga ay diideen maamulka Degmadda baardheere in la aaso,islamarkaana Eheladooda aan lagu Wargalinin xiliga la tooganayay.
Arintaan ayaa kusoo beegmaysa xili Ciidamadda Xoogga dalka Soomaaliyeed oo Fulinaya amar kasoo baxay Wasaaradda Gaashaandhiga ay toogteen 6-ruux ay sheegeen in ay ka Tirsanaayeen Al-shabaab.